November 8, 2021 - Celegroup
ဖြူးကောင်လေးတွေက ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ
November 8, 2021 Celegroup1975 0
ဖြူးကောင်လေးတွေက ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ဆောင်းရာသီဟာ အလွန်အေးလွန်းလှတာကြောင့် တိရစ္ဆာန်တွေဟာ ဒီအအေးဒဏ်ကြောင့်ပဲ သေကြေ ပျက်စီး ကြရပါတယ်..။ဖြူးကောင်လေးတွေဟာ ဒီအခြေအနေကြောင့် သူတို့အချင်းအချင်း နီးကပ်စွာနေလိုက်ပြီး အဲ့ဒီကနေ သူတို့ဟာ အနွေးဓါတ်ကို ရရှိကြပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က ဆူးတွေကြောင့် တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် ထိုးမိကြပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရကြပြန်ပါတယ်..။ ဒီလိုနဲ့ပဲ..၊ တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် မနီးကပ်ပဲ ခပ်ဝေးဝေးနေလိုက်ကြပြန်တော့ အအေးဒဏ်ကြောင့် သေကြေ ပျက်စီးကြရပြန်ပါတယ်..။ နောက်ဆုံးတော့ […]
တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူများအတွက် တစ်သက်တာ ဟောစာတမ်း တန်ဆောင်မုန်းလအတွင်းမွေးဖွားသူများသည် သစ္စာတရားဦးထိပ်ပန်ဆင်သူများ ဖြစ်ကြမယ်ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ထားရှိတတ်ကြတယ်။ စိတ်၌ ခံစားချက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံ ရုန်းကန်ရခြင်းများလည်း များစွာရှိ၏။ ဘဝအစတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမယ်ခက်ခဲသည်ဆိုရာတွင်မောင်နှမသားချင်းအတူတူမှာပင် ကိုယ်က ပိုပြီး ခက်ခဲပင်ပန်းမယ်။အနစ်နာခံကြိုးစားရမယ်။ သို့သော်အဖက်ဖက်မှအခက်အခဲများကိုဇွဲနှင့်စွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်ကြိုးစားရင်း သာမန်ထက်ပိုအောင်မြင်မည်။တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူတို့သည်ဘဝတွင်မိမိအပေါ်နားလည်ပေးသူနည်းတတ်တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းကျိတ်ပြီးခံစားရသောဒဏ်ချက်များတို့ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားရင်း အငြိုးအတေးစိတ်များထွက်ပေါ်လာရတယ်။ မိမိအပေါ် လွှမ်းမိုးခြင်းကိုလုံးဝလက်မခံနိုင် သို့သော်သူတို့ဘဝတွင်အဘွားအမေ၊အစ်မ၊အဒေါ်စသောအမျိုးသမီးကြီးတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို (ကောင်းသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ)သက်ရောက်မှုရှိနေတတ်တယ်။ စိတ်အား၊ လူအားကောင်းတယ် ဘဝတွင်ကြီးမြင့်ထင်ပေါ်ချင်တတ်တယ်။ ဘဝ၏အောင်မြင်မှုကို တိုက်ပွဲပမာ […]
မိန်းကလေးတိုင်း ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာ (၄)မျိုး
မိန်းကလေးတိုင်း ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာ (၄)မျိုး ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေကျ နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတခုကို တခါတရံလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်လိုက်ကြည့်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ ပျိုမေတို့ရေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပျိုမေတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တခါလောက်တော့ အနည်းဆုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁- တယောက်တည်းခရီးတွေ ထွက်ပါ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ တယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ဆိုတာဟာ အနည်းငယ်စွန့်စားရတဲ့ ကိစ္စတခုဆိုပေမယ့် တယောက်တည်းခရီးသွားခြင်းကနေ ထင်မထားလောက်တဲ့ […]
သတိမမူမိတဲ့ ဒီအချက်တွေက သင့်ရဲအောင်မြင်မှုကိုနစ်မြုပ်စေနိုင်တယ်
သတိမမူမိတဲ့ ဒီအချက်တွေက သင့်ရဲအောင်မြင်မှုကိုနစ်မြုပ်စေနိုင်တယ် သေးငယ်တဲ့ရေပေါက်လေးတခုကသဘေႅာကြီးတစ်စင်းကိုနစ်မြုပ်စေသလိုလူတယာက်မှာရှိတဲ့အကျင့်ဆိုးသေးသေးလေးတွကလဲသူ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကိုနစ်မြုပ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ရည်မှန်းချက်မရှိပဲပျင်းရိနေခြင်း ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူကသဲကန္နာရထဲလမ်းပျောက်နေသလိုပါပဲလျှောက်တာလျှောက်နေတယ်ဘယ်ကိုရောက်မယ်မှန်းလဲမသိဘူး။ ဘဝမှာလူတယောက်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ၊ကိုယ်မိသားစု၊ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားချထားဖို့လိုပါတယ်။ (၂)လေ့လာသင်ယူမှုမလုပ်ခြင်း လေ့လာသင်ယူခြင်းကစစ်မြေပြင်ကိုထွက်မယ့်စစ်သူကြီးတွေကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုသင်ကဘာလက်နက်မှမပါပဲတိုက်နေမယ်ဆိုရင်အရှုံးတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ (၃)စည်းကမ်းမရှိခြင်း လူတယောက်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်စည်းကမ်းဆိုတာအရေးပါဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထင်မြင်သေးခြင်းကိုခံရပြီးကိုယ့်မိသားစု၊ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။ (၄)ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးခြင်း၊အထင်သေးခြင်း လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်သေးလွန်းရင်လည်းလူရာမဝင်တော့သလို အထင်ကြီးလွန်းရင်လည်း တခြားသူတွေကိုနှိမ်သလိုဖြစ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ… အဆင်မပြေဖြစ်ကာကိုယ့်ရဲ့ဘဝ၊ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုကကျဆင်းလာတက်ပါတယ်။ (၅)အချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားခြင်း ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေကို Social Media တွေပေါ်မှာပဲကုန်နေကြတယ်။ လူတယောက်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာလဲအချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချတက်ဖို့လိုပါတယ်။ (၆)အသုံးဖြုန်းကြီးခြင်း မလိုအပ်တာတွေဝယ်နေရင်လိုအပ်တာတွေထုတ်ရောင်းရတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲသုံးပါ။မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာမဖြုန်းပါနဲ့။ (၇)အပျော်ပါးမက်လွန်းခြင်း လူငယ်သဘဝဆိုတာကတော့အပေါင်းသင်းများပြီးအပျော်ပါးနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေကကိစ္စမရှိပေမဲ့အကယ်၍သင်ကအပျော်ပါးတွေဖက်မှာပဲ လုပ်တာများနေရင်တော့… သင့်ဘဝရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တာတွဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီအချက်လေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွတ်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင်ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ပါအုံးနော်… အားလုံးပဲအနာဂတ်မှာအောင်မြင်ကြီးပွါးတိုးတက်ကြပါစေ… Advice […]
ကြိုးစားရင်းနဲ့သာ ကျော်လွန်ပါ” ကျွန်တော် TV မကြည့်တာဆိုရင် ( ၂)နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ရုပ်ရှင်ရုံမရောက်တာဆိုရင်တော့ (၅)နှစ်လောက်ရှိပြီ ထင်တယ်။ ဂိမ်းမဆော့‌တော့တာဆိုရင်တော့ (၄)နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ တကယ်ပါ။ ဘ၀မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက် တာတွေကိုသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်လာပြီး ကြိုးစားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်တာတွေကို အချိန်အလွန်အမင်း မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ အချိန်တွေ ပိုနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ ဘ၀ကို စိတ်အေးလက်အေးဖြတ်သန်းနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင် သူဟာ ကြိုးစားသင့်ကြိုးစား ထိုက်တာတွေကိုလည်း ကြိုးစားမနေလို့ပါ။ ငယ်သူ့မှာ ငယ်သူ့အလျောက် ကြိုးစားစရာ၊ […]
တစ်ခါက ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အထမ်းနဲ့ထမ်းပြီး လှည့်လည်ရောင်းချတဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ထမ်းပိုးရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်း ထဲမှာကုန်တချို့ကိုထည့် အနောက်ဘက်တောင်းထဲမှာတချို့ထည့်ပြီး ရွာစဉ် ရွာတန်းတလျောက် လှည့်လည်ရောင်းချရတာပေါ့။ အဲဒီလိုလှည့်လည်ရောင်းချရင်းနွေနေ့လည်တရက်မှာ ရွာနှစ်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ ဇရပ်အိုတစ်ဆောင်နားရောက်တော့ ခရီးတစ်ထောက်နားဖို့ ဇရပ်ပေါ်တက်လာတာပေါ့။ ပါလာတဲ့ ကုန်တွေရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် ရောင်းခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး နားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ပေါ့။ ကုန်ကသာတစ်ဝက်လောက်ရောင်းခဲ့ရတာထမ်းလာတဲ့ဝန်ကတော့ ထူးပြီးရော့မလာခဲ့တော့ပင်ပန်းတာပေါ့။ ဇရပ်ပေါ်တက် အထမ်းလေးချ ချွေးလေးသုတ်ဇရပ်ပေါ်ကရေအိုးထဲက ရေလေးသောက်ပြီးတော့ ခံတွင်းကချဉ်လာ၊ ဆေးပေါ့လိပ်ကလေးကိုထုတ် ဖင်စီခံကလေးကိုကြမ်းနဲ့ခေါက် မီးညှိဖို့လုပ်တော့ မီးခြစ်ကပါမလာ။ အဲဒီအချိန်ကြမှ […]
Application ဒေါင်းပါဆိုတိုင်း သွားမလုပ်ကြနဲ့ ပါကုန်ကြပီ ( သိန်း 50 အလိမ် ခံ ရလို့ )3. 11 2021 အသိတယာက် Any desk app နဲ့ Kpay account heck ( သိန်း 50 အလိမ် ခံ ရလို့ )3% နဲ့ ပြောပါတယ် % […]
အ သက္ (၁၆) ႏွစ္ မွ (၂၄) ႏွစ္အ တြင္း မိန္းကေလး မ်ားသာ ဖတ္ရန္ (တစ္ျခားလူမဖတ္ရ)
ညီမေ လးရေ …. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွားလိမ့်မယ် . . . . .။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေ က လည်း တစ်ချိန် ကျရင် ပြောင်း လဲ သွားပါ လိမ့် မယ် နော် . . .။ […]
အားလုံး သတိထားဖို့ပါ… Speed အားဖြည့် အချိုရည်ကို လူတိုင်း သောက်လို့ မရပါ Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက်၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ သ ကြား ပ မာ ဏ အ များ […]
ပံ့သကူ ပစ်ကာ ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင် ဒါလေးတော့ သတိပြုပါ
မကြာမီ ကာလအတွင်း တန်ဆောင်တိုင်လပြည်နေ့ ကျရောက်လာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ညတွင် ပံ့သကူ ပစ်ကာ ကုသိုလ်ပြုသည့်ဓလေ့မှာ လွန်စွာ ချစ်စရာကောင်းသလို အလှူခံရော အလှူရှင်ရော ပီတိဖြစ်ရတဲ့ အလှူဖြစ်ပါသည်။ ယခုကာလသည် ပြည်တွင်း စ.စ်မက် ဖြစ်ပွါးနေသော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ ပံ့သကူ အလှူများကို အများပြည်သူ မြင်သာသော အိတ်အကြည်များဖြင့်သာ ထည့်သွင်း ပစ်ကြဖို့ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းမမြင်ရသော အိတ်မဲများ စက္ကူအိတ်များ အခြားသော […]
ဒီစာကို ရေးနေရင်းတောင် ကျနော်ကြက်သီးမွှေးတွေ တဖြန်းဖြန်းထ ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်နေမိတယ်.
မိန်းမရဲတောင်ရဲ့ အလှအပကို စိတ်ဝင်စားလို့ သွားကြ ဘုရားဖူးကြ Facebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့ နေရပေမယ့်အဲဒီတောင်ရဲ့သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှားကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို့ ရွာငံမိန်းမရဲ သခင်မ တောင် တော်သမိုင်း နာမည်ကနန်းဧကရီမွှေးဘုရင့် သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့ အချစ်ဆိုတာက ဆန်းကျယ်တယ်လေ သူချစ်မိတာက ကျေးတောသားကုမ္မာရ တဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကို ဘုရင့် ရွေနားတော် ပေါက်ကြား အမျက်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်လား အမဲရိုးက […]